Amidio ny vokatrao rehetra ao anatin'ny 24 ora - World Trade Exchange
wte hitondra mpividy ho anao hividy ny VOKATRAO REHETRA ao anatin'ny 24 ANDRO!
Tsy mila ASA, fandaniam-bola amin'ny dokambarotra na risika avy aminao.
TIANAO $ 10M ka hatramin'ny $ 1B ve ianao eo amin'ny vola azo?
WTE te-hitondra mpividy avy amin'ny tambajotranay manerantany hanomboka mividy $ 10M fanampiny hatramin'ny $ 1B vidin'ny vokatra sy serivisy an'ny orinasa isam-bolana.
100% NY ASA VITA ANAO!
WTE dia hanao 100% ny asa tafiditra hiteraka fitadiavana tombony ho anao tsy misy ezaka, tsy mandany doka, ary tsy misy risika avy aminao. Noho izany, ny tolotray dia mitaky saika tsy misy asa, ezaka, vidin'ny dokam-barotra, na loza mety hitranga avy aminao.
Hanana fifehezana 100% ianao - ao anatin'izany ny fifehezana ny vola azo avy amin'ny ezaka varotra ataonay.
Raha mitondra mpanjifa mividy dolara an-tapitrisany amin'ny vokatrao sy serivisinao izahay, vonona ve ianao hanome vola komisiona 10% anay?
Raha ny valinao amin'ilay fanontaniana etsy ambony dia "ENY", misoratra anarana amin'ny iray amin'ireo drafitra maha-mpikambana SELLER eto ambany.
ETO NY FOMBA FOMBA AZY.